मासिक हाजिरी सार्वजनिक गरेपछि प्रमुखहरु कार्यालयमा बस्ने क्रम बढ्यो ,
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्वत जिल्लामा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरुको मासिक हाजिरी बिबरण सार्वजनिक गर्न थालेपछि प्रमुखहरु कार्यालयमा बढी समय दिन थालेका छन । कार्यालयले कार्तिक महिनाको हाजिरी बिबरण सार्वजनिक गर्दा प्रमुखहरुले कार्यालयमा बस्ने क्रममा सुधार आएको पाइएको हो ।
सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु कार्यालयमा भन्दा अन्यत्र बढी जाने गरेको र कार्यालयमा नबस्ने गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज महिना देखि सर्वसाधरणको जानकारीका लागि कार्यालय प्रमुखको मासिक रुपमा भएको हाजिरी बिबरण सार्वजनिक गर्न थालेको थियो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनाको हाजिरी बिबरणमा यसपटक सार्वजनिक बिदा बाहेक कार्यालय प्रमुखहरु बढी समय कार्यालयमा बस्न थालेको पाइएको छ । असोज महिनामा ३ दिन मात्रै कार्यालयमा बसेका प्रमुखहरु समेत १५ दिन भन्दा बढी बस्न थालेका छन ।
कार्यालय प्रमुखलाई काम प्रति बढी जवाफदेही बनाउन मासिक रुपमा हाजिरी बिबरण सार्वजनिक गर्दा प्रभाबकारी देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले बताए । ‘कार्यालय प्रमुखहरु जिल्लामा बस्ने क्रममा सुधार देखिएको छ’ उनले भने ‘कार्यालय प्रमुखहरुलाई काज, बिदा जस्ता काममा भन्दा सेवाग्राहीको सेवामा केन्द्रित गर्न हाजिरी सार्वजनिक गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी कार्तिक महिनामा पनि सबैभन्दा बढी समय कार्यालयमा बस्ने प्रमुखमा घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समितिका प्रमुख उद्योग अधिकृत रमेशराज रेग्मी रहेका छन । उनले कार्तिक महिनामा २१ दिन कार्यालयमा बिताएका छन । यसपछि जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख बासुदेब रेग्मी बढी कार्यालयमा बस्नेमा परेका । उनी कार्तिकमा २० दिन कार्यालयमा बसेका छन भने असोज महिनामा १८ दिन कार्यालयमा बसेका थिए ।
जिल्ला प्राबिधीक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी १९ दिन र जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख सुवास भण्डारी १८ दिन कार्यालय बसेका छन । भण्डारी कार्तिक ४ गते मात्रै जिल्लामा हाजिर भएका थिए ।
कार्तिक महिनामा सबैभन्दा कम कार्यालयमा बस्नेमा कार्यालयमा बस्नेमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. फडिन्द्र बराल परेका छन । उनी १४ दिन कार्यालय बसेका छन । असोज महिनामा जम्मा ३ दिन कार्यालय बसेका बराल यस महिना भने धेरै समय बसेका हुन । कार्यालयमा कार्तिक महिनामा मात्रै हाजिर हुन आएका अन्य कार्यालय प्रमुखहरुलाई छाड्दा डा. बराल कम समय बसेको देखिएको हो । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख तारा सुनुवार कार्तिक २५ मा सरुवा भएर आएकी हुन भने जिल्ला हुलाक कार्यालयकी प्रमुख अजिता शर्मा कार्तिक ८ गते हाजिर हुन आएकी थिइन । असोज महिना कम समय कार्यालयमा बसेका स्थानिय बिकास अधिकारी युवराज पौडेल पनि कार्तिक महिनामा भने १५ दिन हाजिर भएका छन ।
यो महिनामा ९ दिन सार्वजनिक बिदा परेको थियो । असोजमा कार्यालयमा ४ दिन र बिना काम कार्यालय बाहिर बसेका सिंचाई बिकास सव डिभीजन प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्तिकमा भने जापानमा तालिममा रहेका छन ।
कार्यालय प्रमुखहरु बिना काम जिल्ला छाड्ने र कार्यालयमा नबस्ने प्रबृत्ति बढ्न थालेपछि कार्यालयका प्रमुखहरुलाई जवाफदेही बन्न हाजिरी सार्वजनिक गर्ने ब्यबस्था मिलाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रबिण ढकालले जानकारी दिए । पर्वतमा कार्यालय प्रमुखहरु धेरै समय फिल्ड लेखेर निजी काममा जाने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। बिना काम जिल्ला छाड्ने र परिवार भेटघाटका मेत सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो पनि गरिदै आएको छ।